Wasiir ku-xigeenka Dhalinyarada iyo Cayaaraha “Wasiir Khadiija ayaa Boobtay lacagtii Wasaaradda” - Awdinle Online
Wasiir ku-xigeenka Dhalinyarada iyo Cayaaraha “Wasiir Khadiija ayaa Boobtay lacagtii Wasaaradda”
December 19, 2019 (Awdinle Online) – ku-xigeenka Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha Xukuumadda Soomaaliya Axmed Cumar Islow oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday “musuq-maasuq xooggan” oo ka dhex socda Wasaaradda.
Xildhibaan Axmed Cumar Islow ayaa Wasiirka Wasaaradda Khadiija Maxamed Diiriye ku eedeeyey inay musuq-maasuqday dhammaan lacagihii wasaaradda ee loogu talo-galay in wax loogu qabto dhallinyarada, oo aysan jirin wax waxtar leh oo dhallinyarada dalka loo qabtay.
Wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inuu muddo ka aamusnaa arrintan, balse uusan qarin karin wixii intan ka badan.
Waxa uu baaq u diray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, kana codsaday inuu wax ka qabto “musuq-maasuqa xooggan ee ay wasiir Khadiija ku hayso wasaaradda”.
“Ra’iisul wasaare waxba tari meyso in mar kasta lagu amaano, balse waxaa wax taraya oo lagugu xusuusanaa wixii aad u qabatay dhallinyarada dalka” ayuu yiri Wasiirk ku-xigeenka dhallinyarada iyo cayaaraha Soomaaliya Axmed Cumar Islow.
Wasiir Khadiija weli kama jawaabin eedeynta culus ee kaga timid ku-xigeenkeeda.
Previous articlePresident Muse Bihi of Somaliland Holds Talks with International Partners delegation
Next articleINTERNATIONAL PARTNERS JOINT PRESS STATEMENT ON ELECTIONS IN SOMALIA